ချိုး-ins ပေါ်ပေါက်သည့်အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများခံရ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကာကွယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းထက်ပိုကောင်းကြောင်းကိုငါသိ၏။
supply DESIGN installer ကို repair MAINTENANCE
NSI မီးသတ်နှိုးစက်လန်ဒန် Approved
NSI ပရော်ဖက်ရှင်နယ် installers Approved
high-resolution ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပရိုတိုကော CCTV လုံခြုံရေးစနစ်များ
တံခါးကို Entry စနစ်များ
GuardSysTM အလိုအလျောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုတံခါးကို entry ကိုစနစ်များအတွက်အထူးပြု
access control စနစ်တွေအတွက် / အီလက်ထရောနစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်စစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးမှုများ၏စံချိန် log ။
အမျိုးသားလုံခြုံရေး Inspector အတည်ပြု!
လန်ဒန်အမြဲမြင့်မားရာဇဝတ်မှုနှုန်းသည်နှင့်အတူတစ်မြို့ဖြစ်တော်မူပြီ သငျသညျကောင်းစွာသည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေဆန့်ကျင်တပ်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်လျှင်ခိုးယူ၏ပတ်ပတ်လည် 8400 ခု, ခြိုးဖောနှင့်ဝင်၏ 2524 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် 250+ လုယက်မှုနှင့်အတူအလွန်အန္တရာယ်မကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ GuardSys မှာတပ်ဆင်အားဖြင့်သင်တို့၏ဝုဏ်ကာကွယ် ...
ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ဒေသများတဝိုက်လုံခြုံရေးစနစ်များပြုပြင်ရေးန်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အားလုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုပဲစနစ်များကိုဖြိုဖျက်ကြသောအခါ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်အပါအဝင်အမှားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သို့မဟုတ်ပဲအချိန်နှင့်အတူပျက်ယွင်းနေဖြစ်လာကြိမ်ရှိပါတယ်, အဲဒီရဲ့။ GuardSys ™အဖွဲ့သည်လိုအပ်သောမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်ပေးသွားမှာပါ ...
နည်းပညာကိုလောကီသားတို့သည်အသင်တို့၏စနစ်များယခု antiquated နှင့်သင့်ပြောင်းလဲလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံကြသည်မဟုတ်ကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါအလျင်အမြန်ဒါအပေါ်လှုံ့ဆော်ပေး။ ကျနော်တို့ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်စာရင်းစစ်ထွက်သယ်နှင့်အကြံပြုချက်များလုံခြုံရေးစနစ်များနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ဖို့သင့် system ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို AT ...
ကျွန်တော်တို့ကထိပ်တန်းကနေအရမ်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်သာ source စောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များ (GuardSys) ဆန်းသစ်နှင့်ထုံးစံတည်ဆောက်သို့မဟုတ် bespoke လုံခြုံရေးစနစ်များလိုအပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နေအိမ်များ၏ကြီးထွားလာသောအရေအတွက်အစွန်းနည်းပညာကိုဖြတ်တောက်တတ်၏တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်တယ်။ များစွာသောအခြားမတူဘဲ ...
CENTRAL STATION ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
installation, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး, SERVICE, repair
စောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးစနစ်များလန်ဒန်သို့မဟုတ် GuardSys ™သင့်ရဲ့ဝုဏ်အားလုံး times.We မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရရှိသွားတဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးဖို့ Hi-tech လုံခြုံရေးစနစ်များအကွာအဝေးများကိုသာအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်လုံခြုံရေးစနစ်ကပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အမြဲသူတို့ငါတို့ထံမှလက်ခံရရှိကြောင်းဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးအတွက်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
NOW ကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ In-touch နဲ့ Get
GuardSys မှာအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်အကျိုးရှိစွာလုံခြုံရေးစနစ်အတပ်ဆင်ခပေါ်မှာငါတို့-မိမိကိုယ်ကိုရဲ့ဂုဏ်ယူ။ အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအားဖြင့်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုရာနေပါစေလုံခြုံသက်သာခံစားရစေရန်တည်ဆောက်ထားကြသည်ရွေးချယ်မှုဟာ host ကိုဆက်ကပ်။ Guard Security Systems LTD is also NSI NACOSS (GOLD) and Safecontractor Approved Company. Safecontractor ဗြိတိန်ကန်ထရိုက်တာများအကြားကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၌အလွန်မြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းကိုအသိအမှတ်ပြုသောဦးဆောင်တတိယပါတီအသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေး Inspector (NSI) ကုမ္ပဏီ Approved ။
လုံခြုံရေးစနစ်များ, က Wired, ကြိုးမဲ့ & Hybrid ကိုကျူးကျော်နှိုးစက်စနစ်များ၏အနုပညာအကွာအဝေး၏ပြည်နယ်လွှတ်တော်။
24 နာရီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရေးပေါ်စက်ရုံနှင့်အတူ install လုပ်ပြီးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားကျူးကျော်နှိုးစက်စနစ်များ
သင့်လက်ရှိလုံခြုံရေးစနစ်ကချွတ်ယွင်းနေပါက, သငျသညျအဆင့်မြှင့်တင်ပေါ်အကွံဉာဏျချင်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးစနစ်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ, ထို့နောက် GuardSys ™မှာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
ငါစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များအနေဖြင့် Full HD ကို CCTV နဲ့ငါ့အဟောင်း CCTV ကင်မရာစနစ်အားအဆင့်မြှင့်ကြပြီ။ ဒါဟာအံ့သြစရာင် !! CCTV ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားငါ့ကိုအများကြီးအံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်စောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များအနေဖြင့်ထောက်ခံမှုလည်းကြီး။ တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်နည်းပညာအကူအညီဖြင့်ယေဘုယျအားကြီးသောအရည်အသွေးပြည့်။ ငါလူတိုင်းကိုစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်
, Fantastic ဖော်ရွေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှု။ မေးခွန်းမရှိရင်ငါတဖန် GuardSys ကိုသုံးလိမ့်မယ်။
အလွန်, ဖော်ရွေယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် GuardSys မှ access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည်မြတ်သောဝန်ဆောင်မှု။ အလွန်အမင်းကိုထောက်ခံအုကူံနှင့်ငွေအဘို့အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုး။
ကျနော်တို့သိသမြှတို့ကိုအကြှနျုပျတို့တစ်အိမ်ထဲမှာသူခိုးနှိုးဆော်သံစေချင်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ စောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာစနစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့သို့ဒုံးပျံသိပ္ပံပညာလှည့်။ တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးသပ်ရပ်သပ်ရပ်လှပတဲ့အင်ဂျင်နီယာများက install လုပ်ထားတဲ့စနစ်နှင့်အတူအမှန်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်။
ငါ install လုပ်ကြိုးမဲ့အိမ်ထဲမှာသူခိုးနှိုးဆော်သံနှင့်အတူပျြောရှငျခဲ့; အိမ်မှာငါ့အလိုရှိသမျှလိုအပ်ချက်တွေပြည့်တဲ့အခြေခံလုံခြုံရေးစနစ်။ ငါနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုစနစ်နှင့်အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းတဆင့်သှားသော - - ပထမဦးဆုံးခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဦးအလွန်ဖော်ရွေနှင့်လူနာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့တပ်ဆင်ရန်တဆင့်န်ဆောင်မှု, အတော်လေးကောင်းသည်။ ငါမည်သူမဆိုဤယောက်ျားတွေဖို့အကြံပြုပါတယ်။
ချဒ်မိုက်ကယ် Forbes မဂ္ဂဇင်း
installer ကိုအချိန်နှင့်ချောကျူးကျော်နှိုးဆော်သံ installation ကိုအပေါ်ကိုတက်လှည့်။ အဖြစ်မကြာမီသူရောက်လာအဖြစ်အလုပ်နှင့်အတူပေါ်တယ်။ ဘယ်လိုကျူးကျော်နှိုးဆော်သံကိုအသုံးပွုဖို့ငါ့အားပြ။ အလွန်သာယာသောနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေ။
ကယ်လ်ဗင်ဝိန်း Harris က
အဆိုပါကျူးကျော်နှိုးဆော်သံ installation ကိုအလွန်လျင်မြန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာမျှော်လင့်ကျော်လွန်သွား ... ကျိန်းသေ GuardSys ဖို့အကြံပြုပါတယ်။
ဂျိမ်း Delon Whitmire
ငါအိမ်ထဲမှာသူခိုးနှိုးဆော်သံ system ကို installation နဲ့ဒါ့အပြင်သူခိုးကအိမ်နှိုးဆော်သံကိုအသုံးပွုဖို့ဘယ်လိုတယောက်သရုပ်ပြတနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကျိန်းသေသောကွောငျ့အကြှနျုပျအားပြကျွမ်းကျင်စွာ၏ GuardSys အကြံပြုပါသည်လိမ့်မည်။
ငါသူတို့ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြု၏ကြီးစွာသောအလုပ်အဘို့အ GuardSys ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများတစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာအသံနဲ့ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလွန်ထိရောက်နှင့်ထောကျအကူပွုကွသညျ။ ငါဘယ်သူကို GuardSys အကြံပြုပါသည်လိမ့်မည်။
GuardSys ကိုငါ့အသံနှင့်ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်နှင့်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းမှာလျင်မြန်စွာငါ့အနှိုးဆော်သံစုံစမ်း။ GuardSys မြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသံနှင့်ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များကို install နှင့်ငါ့အိမ်ကနှိုးဆော်သံစနစ်ဖြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းမှာသူတို့ရဲ့အမြန် + ခြွင်းချက်ဝန်ဆောင်မှုအောက်ပါ GuardSys အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ 100% ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်
Glenn Leslie Smith က
GuardSys ငါ့အိမ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသံနဲ့ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Tyrone Davis က
ကိုယ့်အိမ်မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်စနစ်များကိုလိုအပ်တဲ့အခါ, ငါအမြန်တုန့်ပြန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပိုက်ဆံတပ်ဆင်ဘို့တန်ဖိုးကိုပေးနိုငျကွောငျးကို access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ installer ကိုကုမ္ပဏီရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ထိုအခါငါစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုအလုပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းကိုးကား, ဖော်ရွေပြီးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် services..will အမြဲမည်သူမဆိုဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာ install လုပ်ပြီးသားတစ်ဦး access ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်ရှိခဲ့သည်ကို၎င်း, ရလဒ်များကိုနှင့်အတူအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ စနစ်သုံးပြီးဖို့ကိစ်စတှငျအရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပွုဖို့ကအလွန်လွယ်ကူရှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့ access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို install လုပ်လိုသောမည်သူမဆိုမှ GuardSys ဖို့အကြံပြုပါတယ်။
Trevion Mason ဆို
တစ်ဦး ++++ မြတ်သောဝန်ဆောင်မှု, ကျွန်တော်တို့ကို access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအကြောင်းကိုကောင်းသောအသိပညာကိုပေးတော်မူ၏။ အလွန်ရိုးသားတဲ့န်ထမ်း, ဒီနေ့ခေတ်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲ ... ။
"ငါသည်သုတေသန၏လစုံတွဲတစ်တွဲကိုပြု၏ကစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များမှဆင်းလေ၏။ ပြီးနောက်အားလုံးကကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည်သည့်အခြား system ကိုထွက်ရိုက်ကြ၏။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးစွာသောအကူအညီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများမှာအကောင်းဆုံး CCTV ကင်မရာတပ်ဆင်။ သငျသညျစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "
ဘရန်ဒီ Rochelle Gray
ကျနော်တို့ CCTV ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က install လုပ်ခဲ့, ငါတို့ရုံးများအများကြီးပိုလုံခြုံခံစားရတယ်။ မည်သူမဆိုမည်သည့်မဆိုင်းမတွ GuardSys ကိုသုံးနိုင်သည်။
စောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးစနစ်များ, စီစဉ် install လုပ်, စောင့်ကြည့်နှင့်ငါတို့ CCTV ကင်မရာစနစ်အားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ 2013 ခုနှစ်နွေရာသီကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်စိတ်ချရသော CCTV ကင်မရာစနစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သကဲ့သို့တာဝန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာဘို့ GuardSys အကြံပြုမရှိမဆိုင်းမတွရှိသည်။
အလွန်ဖော်ရွေယောက်ျားတွေ။ စျေးနှုန်းများကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်န်ထမ်းများ၏တုန့်ပြန်လည်းအလွန်ကောင်းလှ၏။ ဒီကုမ္ပဏီကိုသင်စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အနေဖြင့်အကွာအဝေးထုတ်ကုန်များသာထိပ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ကောင်းမွန်စွာပြုကြ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CCTV စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အပေါ်အလွန်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုခစျြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ် CCTV ကင်မရာက system ကိုတူ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးမှာ install လုပ်ပြီးမီးနှိုးစက်။ ငါတို့သည်သူတို့ပိုက်ဆံအတွက်အလွန်ကိုယ်ရယ် & အလှနျတနျဖိုးဖြစ်တွေ့အဖြစ်ကျနော်တို့နောက်တဖန်သူတို့ကိုအသုံးချမယ်လို့
စောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦဆိုဒ်များပေါ်မှာမီးနှိုးစက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နှိုးဆော်သံစောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး။ အဆိုပါဝန်ထမ်းများယဉ်ကျေးများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့သည်နောက်မဆိုင်းမတွနှင့်သင်၏လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေအဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုငျသ
GuardSys ခြွင်းချက်ခဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကြောငျးအတှကျမီးနှိုးစက် install လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ပက်ထရစ် Jermaine Edwards က
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါမည်သူမဆိုပေါ်သို့ပွုပွငျမီးနှိုးစက်အဘို့အ GuardSys အကြံပြုပါသည်လိမ့်မည်။ ကောင်းသောအမှု,
Leroy Carlton ရစ်ချတ်ဆန်
ကျနော်တို့အကြံပြု, GuardSys ထံမှကြိုးမဲ့မီးနှိုးဆော်သံစနစ်များအတွက်ကောင်းသောဖောက်သည်အတှေ့အကွုံခဲ့
ပက်ထရစ် Henderson Cooper က
စောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးစနစ်အနှစ်တစ်အရေအတွက်အဘို့အကြှနျုပျ၏အသံနှင့်ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပေးလျှက်ရှိသည်။ ငါမကြာသေးမီကငါ၏အအသံနှင့်ဗီဒီယို entry ကိုစနစ်များကိုအပြည့်အဝစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်အားဖြင့်အဆင့်မြှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုသူတို့ကအရမ်းတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တွေ့စဉ်မပြတ်ငါစောင့်လုံခြုံရေးစနစ်ငါမလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုခုရောင်းချမည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံပါ၏ခဲ့ကြပြီ။ အကျိုးရှိစွာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးကောင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
မိုက်ကယ် Keith အစိမ်းရောင်
T က: 0207 887 2244